Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika beagle
Alika mpiompy beagle / mpiandry alemanina
Chevy the Beagle Shepherd amin'ny faha-7 volana
Ny alika mpiandry ondry dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Beagle ary ny Mpiandry Alemanina . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ho 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
sarin'ireo karazana alika araka ny filaharan'ny abidia
'Ity no mixako Beagle / Shepherd Alemanina, Diesel! Izy dia alika kely amin'ity sary ity. Fony izy 9 volana sy tapany dia nilanja dimam-polo kilao izy ary tamin'io taona nijoroana io dia teo an-tratrako ny tongony, saingy izaho dia 5'1 fotsiny ka tsy dia milaza firy izany. Tsara miaraka amin'ny ankizy sy ny hafa izy alika , na dia alika lahy aza sarotra noho izy ny vavy. Tsy dia mahita vaovao betsaka amin'ity hybrid ity aho, fa alika mahagaga izy. Izy dia mamy, miaro ary goofy be! Izy dia mora hampiofana , fa mbola tsy hanao zavatra be izy raha tsy mitsabo. Mavitrika be izy, saingy hilalao mandra-pahalany ritrany, avy eo afaka matory mandrakizay izy. Tsy midradradradra izy fa isaky ny volana manga, ary toa manaraka ilay Mpiandry Alemanina bebe kokoa, na dia manana ny sofina floppy sofina aza izy. Enga anie mba ho fantatro ny halehiben'ny azony, tsy mihoatra ny enimpolo pounds anefa aho! '
gordon setter volamena retriever mifangaro
Biskit the GSD / Beagle afangaro amin'ny 2 taona— 'Biskit dia tena alika mavitrika . Mihazakazaka be ao amin'ny ambadiky toa azy mbola alika kely. Tiany ny mitsako zavatra na dia miaraka aminy aza mitsako kilalao. Mahay amin'ny fizahana isan-taona izy. Izy tsiky miaraka amin'ny nifiny indraindray. izany toa ratsy fa tsy izy kosa. Tsy tiany saka . Tsy tiany avela irery mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fotoana iray, izay toy ny adiny 2. '
alika kely dane mainty sy fotsy
alika kely mifangaro feist amidy
Labrador sy amerikana bulldog mix
andrefana ambonin'ireo terrier sy ny yorkie Mix
amboadia mpiandry ondry amboadia mifangaro fotsy
alika kely yorkie pin amidy